Chii chinoitika kana ndikachinja router yangu kumba nemidziyo yeKeKKit? | IPhone nhau
Mazuva mashoma apfuura ini ndakachinja yangu internet sevhisi opareta uye mbozhanhare kumba, izvi zvaireva, pamusoro pekuchengetedza hupfumi (mune yangu), musoro mudiki mukubatana kwemidziyo yekumba yandakamisa kumba. Neraki kana zvinosuruvarisa ndinofanira kutaura kuti hapana akawandisa michina yakabatana neiyo router, asi ichokwadi kuti izvo zvishoma zvaunazvo iwe uchafanirwa kuidzosera iyo zvachose zvakare.
Tangazve uye dzoreredza makomputa, resynchronize uye gadzirisa Pamba
Muchiitiko chekuti iwe ukachinja opareta wako kumba, zvese zvishandiso zvekushandisa pamba zvawakabatana ne router zvinorasikirwa nechiratidzo pamwe neshanduko uye izvi zvinoreva kutangazve kwakazara kweumwe neumwe wavo. Izvo zvinowedzera zvishandiso, basa rakawanda uye mune ino kesi zvakakosha kuti uzive kuti kuve neKeKKodhi kodhi kune yega yega yavo yakachengetedzwa kupfuura mudziyo pachayo kunokosha. Pane akawanda mwenje mabumba, switch, uye zvichingodaro, iyo kodhi inouya pane yakanamatira chitambi, asi zvinonyanya kusununguka kuve nepepa riine rairo uye nekodhi yacho pachayo kuwedzera zvese kudzosera kuApp App.
Kuva nemawoko ako bhuku remidziyo yega yega kunodiwa kuti ukwanise kugadzirisazve chigadzirwa uye kwandiri ini zvaidikanwa mune akati wandei emidziyo, saka usambofa wakarasa rairo yeako HomeKi-inoenderana mwenje mabumba, magetsi emagetsi kana michinat sezvo mune izvi zviitiko ungangoda kumisazve pafekitori uye pasina ivo ringave riri basa rakawanda, tsvaga mambure emanyowani nevamwe.
Muchidimbu, izvo zvaunofanirwa kuita mune izvi zviitiko ndezvekudzoreredza zvese zvinhu, kubva kune iwo mababu ivo pachavo kune akabatana ekuchengetedza makamera, nezvimwe Ese aya zvikwata mune yangu kesi aive "akasungirirwa" mushure mekuchinja kwe router nekambani, sezvazviri zvine musoro. Ipapo ini ndaifanirwa kuwedzera imwe neimwe yadzo imwe neimwe muImba app, Ini ndanga ndambovabvisa kubva kuapp. Icho chinhu chinoshanda chinogona kuve chinonetsa kana iwe uine zvishandiso zvakawanda zvakabatana neKeanKit, saka chengeta izvi mupfungwa kune izvi zvinoshandiswa nevashandisi pamba kana muhofisi.
Iyo Apple TV ndicho chinhu chekutanga chaunofanirwa kubatanidza kune itsva WiFi network kana iwe ukaishandisa sebhiriji muKeKKit, zvakare iyo HomePod kana iPad kana iri yako kesi. Ipapo zvichave zvakafanira kuti ubatanidze zvakare midziyo imwe neimwe uye kuzviita kugadzirisa kwakakwana kunokosha panguva imwe chete uye izvi zvinogona kuwanikwa pawebhusaiti yemugadziri kana mumirairo yechigadzirwa.
[YEMAHARA] Sezvavanotaura mune zvakataurwa nekuchinja ssid uye password zvinoita kunge zvakakwana kuti zviite kuti zvishande, mune yangu nyaya ndanga ndisingazive nezve iyi sarudzo nekuti anga ave makore kubva pandakachinja opareta uye saka zvandakaita kwaive kuisa zvese zvakare. Chero zvazvingaitika, zvakakosha kuchengetedza manhamba emidziyo yeKeKKit uye nemamwe magwaro kuti utangezve kana zvichidikanwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomeKit » Chii chinoitika kana ndikachinja router yangu kumba nemidziyo yeKeKKit?
Ini ndinongo shandura zita remumbure uye password imwechete yeiyo yapfuura router uye hapana imwe shanduko inodiwa
1st geek ... kana izvo ...
Haufanire kuzviita zvakare.
Ita imwe tsvagiridzo, vanhu vanotora makomendi ako zvakanyanyisa, nekuti iwe unofanirwa kunge uri pro maneja yeapulo ecosystem.
Icho chete chirevo chekudzidzisa.
Ndachinja makambani kaviri uye ndangodaidza zita rekuti ssid nephasiwedi sezvavakatotaura uye vachibhururuka ...
Ndine airport capsule nguva uye ndizvo zvandinoshandisa network saka handishandisi maWi-Fi evashandisi, ndinowana mukuchengeteka uye 0 matambudziko pese pandinoshandura anoshanda.
Mushure mekugadzirisa chinyorwa, anga ave makore kubva pandakachinja internet yangu opareta uye ini ndakanga ndisingazive nezve sarudzo.
Ichashandira avo vari mumamiriro akafanana, maita basa